အန် တီကြီး နာမည် က ဒေါ်မေမေသန်း ကျနော်တို့အဆောင်ကျောင်းသားတွေခေါ်သည်က “အန် တီကြီး” အသက်က၅၀ အသက်ကြီးပေမယ့် မပျက်စီးသေး ယောက်ျားက လွန်ခဲ့တဲ့ ၁နှစ်ကျော်လောက်ကမှ ဆုံးသွားတာဆိုတော့ မုဆိုးမလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီး။ အန်တီကြီးမှာ သမီးတစ်ယောက်ရှိပြီး မကွေးမှာ အိမ်ထောင်ကျသွားသည်။ တနှစ်တခါတော့ အလည်လာတာတွေ့ဖူးသည်။ အန်တီကြီးရဲ့ အခုလက်ရှိရုပ်ရည်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားကိုကြည့်ရင် ငယ်ငယ်ကတော်တော်လှခဲ့မယ့်ပုံ။
ဧကန်မုချ ဆံပင်ကကျောလည်လောက် မျက်နှာသွယ်သွယ်လေးနှင့် နှာတံစင်းစင်းလေး နှုတ်ခမ်းလေးများဆို ပန်းရောင်သမ်းချင်နေတုန်း မျက်မှန်တပ်ထားရတော့ တော်တော် ကလပ်ဆစ် ဆန်သည်။ ရုပ်အနီးစပ်ဆုံးပြောရရင် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ခင်ဇာခြည်ကျော်ကို အသက်၅၀ လောက်မှန်းပြီး မျက်မှန်တပ်ကြည့်ပေးလိုက်။ အဲဒါဆို အန်တီကြီးရဲ့ပုံကို မျက်လုံးထဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အဆောင်က ယောက်ျားလေးကျောင်းသားအဆောင် မိန်းမဆို၍ အန်တီကြီးတယောက်သာရှိသည်။
တဆောင်လုံးက ယောက်ျားလေးတွေကလည်း မိန်းမဆို၍ ဒီအန်တီကြီးသာရှိတာမို့ အကုန်လုံးက ဒီအန်တီကြီးတွေ့လျှင် သွားရည်တများများ အသက်က ၅o ဆိုပေမယ့် အခုထိအရွယ်တင်နေတုန်း ခါးသေးသေးလေးပေမယ့် အိုးကတော့ တော်တော့်ကိုကျန်နေတုန်း နို့ကချွန်ချွန်လုံးလုံးလေးနဲ့ နည်းနည်းတော့ တွဲကျချင်နေပြီ အန်တီကြီးလမ်းလျှောက်သွားလျှင် အတွင်းခံမဝတ်ထားတော့ တင်ပဆုံက အိကနဲ အိကနဲ ဒါတွေအကုန်လုံး ကျုပ်မြင်ဖူးကတည်းက အန်တီကြီးကို မှန်းလိုးပြီး ဂွင်းထုနေခဲ့တာကြာပြီ သူ့ယောက်ျားရှိကတည်းကဆိုပါတော့ သူ့ယောက်ျားက ရောဂါသည်ဆိုတော့ ဘွားတော်၏အလိုဆန္ဒကို မဖြည့်ဆည်းနိုင် ဘွားတော်သွေးသားဆာလောင်နေတာ ကျုပ်ရိပ်မိနေတာကြာပြီ ဘွားတော်ရေချိုးလျှင် တော်တော်များများ ကျုပ်ချောင်းကြည့်နေကျ ရေချိုးခန်းက သုံးထပ်သားကာအလုံဆိုပေမယ့် ကျုပ်လက်ကမြင်းပြီး အပေါက်ဖောက်ထားသည်။
ဒါကိုဘယ်သူမှမသိ ကျုပ်လည်းအဆောင်ထဲကကောင် ဘယ်ကောင့်ကိုမှမပြောပြ။ ပြောပြလိုက်လျှင် ကျုပ်ငတ်သွားမယ်မှန်း သိပြီးသား။ ဒီလိုနဲ့သူ့ယောက်ျားဆုံးသွားပြီးကတည်းက ကျုပ်အတွက် ဂွင်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ တနေ့ကျုပ်အခန်းထဲရှိနေတုန်း ခေါင်းရင်းပြတင်းမှန်တံခါးကို လာခေါက်ပြီး “သားရေ မောင်သူရရေ အန်တီ့အခန်းထဲက စားပွဲလေးရွှေ့ချင်လို့ အန်တီတယောက်တည်း မနိုင်လို့ အန်တီ့ကို တချက်လောက်ကူပါဦးသား” ကျုပ်အရမ်းပျော်သွားတယ် တစ်ဆောင်လုံးကကောင်တွေ ကျောင်းသွားကြ အလုပ်သွားကြနဲ့မို့ ဘယ်ကောင်မှမရှိ။ တစ်ဆောင်လုံး အန်တီကြီးနဲ့ ကျုပ်နဲ့နှစ်ယောက်တည်း။ အဲဒီအသိက တကိုယ်လုံးရှိန်းဖိန်းတက်သွားတယ်။
“ဟုတ်ကဲ့ လာပြီနော် အန်တီကြီး” ဒါမျိုးတော့ ဘယ်ရမလဲ ကျုပ်ကလည်း နပ်ပြီးသား အပေါ်ကစွပ်ကျယ်ပါးပါးပဲဝတ်ပြီး အောက်ကပုဆိုး ပုဆိုးအောက်က ဝတ်နေကျအတွင်းခံပါ ချွတ်ထားခဲ့လိုက်သည်။ အန်တီကြီးအခန်းဝရောက်တော့ တံခါးခေါက်ပြီး “အန်တီကြီးသားရောက်နေပြီဗျ” “အေး သားရေ မောင်သူရ ခဏလေးနော် အန်တီအကျီင်္လဲနေလို့” ကျုပ် မကြားချင်ယောင်ဆောင်ပြီး တံခါးတွန်းဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ကွက်တိ ဘွားတော်က တံခါးလော့မချထား တံခါးဖွင့်ဝင်လိုက်တော့ အင်္ကျီလဲပြီး ကြယ်သီးမတွယ်ရသေး။
ဘရာစီယာမဝတ်ထားသော အန်တီကြီးက ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြင့် မျက်နှာကြီးနီရဲလျက် ဟိုဖက်လှည့်သွားပြီး ကြယ်သီးကပျာကယာတွယ်ပြန်သည်။ ပါတိတ်ထမိန်တပတ်နွမ်းဝတ်ထားပြီး ကျုပ်ဖက်ကိုကျောပေးထားတော့ ဖင်ကြီးကို အနီးကပ်ကြည့်လိုက်တယ်။ ထမီကိုတင်းကျပ်နေအောင်ဝတ်ထားတော့ တင်ကြီးက အယ်ထွက်နေသည်။ အခန်းထဲမှာ ဖိုမနှစ်ယောက်တည်းဆိုတဲ့ အသိစိတ်ကြောင့် လီးကချက်ချင်းတောင်လာတယ်။ အတွင်းခံမဝတ်ထားတော့ ဘယ်လိုမှဖုံးမရ။
လီးကရှေ့ကို ငေါထွက်နေတယ်။ ကြယ်သီးတွယ်ပြီး ကျုပ်ဖက်ပြန်လှည့်လာတော့ ကျုပ်လီးကြီးငေါထွက်နေတာမြင်ပြီး ဘွားတော်လန့်သွားတယ်။ တဖက်ကို မျက်နှာလှည့်ပြီး လေပူမှုတ်ထုတ်တာတွေ့လိုက်တယ်။ ကျုပ်အကြံ ပထမအဆင့်အောင်တယ်။ ဘွားတော်မမြင် မြင်အောင်ပြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ တမင်သက်သက်အတွင်းခံမဝတ်ခဲ့တာ မှန်သွားတယ်။
“အန်တီကြီး ဘယ်စားပွဲရွှေ့မှာလဲဗျ” ကုတင်ဘေးက စားပွဲကိုပုတ်ပြပြီး “ဒီစာရေးစားပွဲ ပုပုလေးပါသား ပိတောက်သားအနှစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့စားပွဲဆိုတော့ နည်းနည်းလေးတယ် သားက ဟိုဖက်ကမလိုက် အန်တီက ဒီဖက်ကမပြီး အခန်းထောင့်ကို ရွှေ့ရအောင်” “ဟုတ် ဟုတ် အန်တီကြီး”ဆိုပြီး နှစ်ယောက်ပြိုင်တူ ကုန်းမလိုက်တဲ့အချိန် အင်္ကျီလယ်ဟိုက်ဝတ်ထားပြီး ဘရာစီယာမပါတော့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကအယ်ပြီး တွဲကျနေတယ်။ ကျုပ်မျက်နှာနဲ့ သူ့နို့နဲ့က တတောင်လောက်သာဝေးတော့တယ်။
တမင်သက်သက်ကို နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တယ်။ ကျုပ်သေချာစိုက်ကြည့်နေတာမြင်တော့ အန်တီကြီးရှက်ပြီး စားပွဲမထားလျက်နဲ့ လက်နှစ်ဖက်ထဲက ညာဖက်လက်နဲ့ ရင်ဖက်ကို သူပြန်အုပ်လိုက်တယ်။ ကျန်တဲ့ဘယ်ဖက်လက်နဲ့မနိုင်တော့ ရှေ့ကိုဟက်ထိုးငိုက်ကျပြီး ကျုပ်နဖူးကို သူ့နဖူးနဲ့ ဂွပ်ကနဲလာဆောင့်မိပါလေရော။ ဆောင့်ချက်ကပြင်းတော့ ကျုပ်ကယောက်ျားလေးမို့သိပ်မနာပေမယ့် သူ့ခမျာ မျက်ရည်အဝိုင်းသားနဲ့ နဖူးလေးကို လက်ကလေးနဲ့ဖိပွတ်နေရှာရဲ့။
ကျုပ်လည်း တအားသနားသွားပြီး လက်ဖဝါးလေးနှစ်ဖက်ပွတ် အာငွေ့လေးမှုတ်ပြီး သူ့နဖူးလေးကို ကျပ်ထုပ်လေးထိုးပေးတော့ သူ့ခမျာ အပျိုစင်လေးတယောက်လို ရှက်သွေးလေးဖျာသွားလေရဲ့။ ကျုပ်သိလိုက်ပြီ။ ကျုပ်ရှေ့ဆက်တိုးလို့ရပြီ။ အဲဒါကြောင့် အန်တီကြီးနဲ့ တထွာလောက်အကွာထိတိုးရပ်လိုက်ပြီး ကြင်ကြင်နာနာလေးနဲ့ ကျပ်ထုပ်ထပ်ထိုးပေးလိုက်တယ်။ အန်တီကြီးက ကျနော်လုပ်ပေးသမျှကို ငြိမ်ခံနေပြီး ရှက်လို့ထင်ပါရဲ့ မျက်နှာလေးတော့ နည်းနည်းစောင်းထားတယ်။
လက်နှစ်ဖက်က ကျုပ်ရင်ဘတ်ပေါ်တင်ထားတယ်။ မထူးတော့ပါဘူးဆိုပြီး ကျုပ်လည်း သူ့ပုခုံးလေးနှစ်ဖက်ကိုကိုင်ပြီး နဖူးကအဖုလေးကို ပါးစပ်နဲ့ခပ်ဖွဖွလေး အာငွေ့ပေးလိုက်တယ်။ သူလန့်ပြီး မော့ကြည့်တယ်။ ကျုပ်လည်းပြုံးပြပြီး ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းတော့ အလိုက်သင့်လေးမှေးပါလာတယ်။ ဘရာစီယာမဝတ်ထားတော့ နို့နှစ်လုံးက ကျုပ်ရင်ဘတ်ကို အိအိလေးလာဖိတယ်။ လီးကချက်ချင်းတောင်လာပြန်ရော။ အန်တီကြီးရဲ့မေးစေ့လေးကိုင် ခေါင်းလေးမော့စေပြီး မျက်လုံးချင်းဆုံကြည့်လိုက်တော့ ကျုပ်ဘယ်လိုမှမနေနိုင်တော့ဘူး။ ပါးစပ်ချင်းတေ့ပြီး ကစ်ဆင် ဆွဲလိုက်တယ်။
သူလည်းအလိုက်သင့်ပဲ ကျုပ်နှုတ်ခမ်းတွေပြန်စုပ်ပြီး အန်တီဖွါးဖွါး လျှာလေးနဲ့ပါ ပွတ်သပ်ဆွဲတယ်။ ကျုပ်လက်နှစ်ဖက်က အန်တီကြီးတင်ပါးကို ညှစ်ကိုင်ပြီး ရှေ့ဆွဲကပ်လိုက်တော့ ကျုပ်လီးကြီးက အန်တီကြီးရဲ့ပေါင်ကြားထဲကို ကွက်တိသွားထောက်တယ်။ သူလန့်သွားပြီး လက်နဲ့လှမ်းစမ်းပြီး ကျုပ်လီးကြီးကို ကိုင်ကြည့်တယ်။ “သားရယ် ဖြစ်ပါ့မလား သားဟာကြီးက အကြီးကြီးပဲ အန်တီ့လက်ကောက်ဝတ်လောက်ရှိတယ်”ဆိုပြီး ကျုပ်ပုဆိုးကိုလှန်ပြီး သူမရဲ့လက်ကောက်ဝတ်နဲ့ ကျုပ်လီးကြီးကို တိုင်းကြည့်တယ်။
“ဖြစ်ပါတယ် အန်တီကြီးရဲ့ သားလီးလေးက ၆လက်မလောက်ပဲရှိတာပါ အတုတ်ကလည်း ဂျိုင်းစွတ် ဗူးလောက်ပဲတုတ်တာပါ အန်တီရဲ့” “အမလေးလေး ကိုယ်တောချော ၆လက်မလောက်ကို လီးလေးတဲ့လားဟမ်” ဆိုပြီး ကျုပ်နှုတ်ခမ်းလေးကိုလှမ်းနမ်းတယ်။ “ကဲပါ အန်တီကြီးရယ် သားဖြည်းဖြည်းလိုးပေးပါ့မယ်နော်” ဆိုပြီး သူ့ကို ကုတင်ပေါ်ပွေ့တင်ပြီး သူ့ကိုယ်ပေါ်မှောက်ချလိုက်တယ်။ နှုတ်ခမ်းချင်း ကစ်ဆင် ဆွဲရင်း လက်တဖက်က ထမိန်လှန်ပြီး အန်တီကြီးရဲ့စောက်ဖုတ်ကို အသာလေးအုပ်ကိုင်လိုက်တယ်။ သူတွန့်သွားတယ်။ စောက်မွှေးလေးတွေက နုပြီး အုံထူသည်။ တဖြည်းဖြည်း ကစ်ဆင် ဆွဲနေရာက ပါးစပ်နဲ့ သူ့လည်ပင်းကနေအောက်လျှောပြီး နို့နှစ်လုံးပေါ်မျက်နှာအပ်လိုက်တယ်။
အင်္ကျီက မချွတ်ရသေး။ ဗြန်းကနဲနေအောင် အကျီင်္ီရင်ဘတ်ကို ဆွဲဖြဲပစ်လိုက်တော့ ကြယ်သီးတွေကတစ်စစီပြုတ်ထွက်ကုန်သည်။ “သားရယ်ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါဟဲ့” အန်တီကြီးလန့်ပြီးအော်သည်။ နို့နှစ်လုံးကို အားရပါးရညှစ်ကိုင်ပြီးနို့စို့တော့ အန်တီကြီး တွန့်လိမ်ပြီး တအင်းအင်းညည်းနေရှာရဲ့။ လက်တဖက်က စောက်ဖုတ်ကို အသာအယာပွတ်ပေးပြီး စောက်စိလေးကို လက်ခလယ်လေးနဲ့ဆွပေးတော့ စောက်ရည်လေး နည်းနည်းထွက်လာတယ်။ အသက်ကကြီးပြီဆိုတော့ ငယ်ရွယ်စဉ်ကလောက်တော့ အရည်မရွှမ်းနိုင်တော့။
ကျုပ်ကုတင်အောက်ဆင်း ဒူးထောက်ထိုင်ပြီး အန်တီကြီးရဲ့ ပေါင်ကြားထဲကို မျက်နှာဇွတ်အပ်လိုက်တော့ အန်တီကြီးက ခေါင်းကိုဇွတ်တွန်းပြီး “ဟဲ့ ဟဲ့ သား ငရဲတွေကြီးကုန်တော့မှာပဲ” “မကြီးပါဘူး အန်တီကြီးရဲ့ သားက အခုမှ အန်တီကြီးရဲ့ မြေးမလေးထက် ၂နှစ်ပဲကြီးတာဆိုတော့ အန်တီကြီးက သားဖွားဖွားအရွယ်ပေါ့” “သားကအခု ၁၉နှစ်ပြည့်ပြီ အန်တီကြီးက ၅၀ ဆိုတော့ သားက အန်တီကြီးကို ကိုယ့်ဖွားဖွားလိုပဲ ဖွားဖွားလို့ ခေါ်မယ်နော်” “အပြောကောင်းတဲ့ ကိုယ်တော်ချောလေးရေ သဘောပါတဲ့ရှင်” အဲဒါနဲ့ ကျုပ်လည်း အဖွားရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို လျှာနဲ့ပယ်ပယ်နယ်နယ်လျက် စောက်စိလေးကို လျှာနဲ့ကလိပြီး ပါးစပ်နဲ့ဆွဲစုပ်လိုက်တော့ ဖွားဖွားတွန့်တွန့်လူးပြီး တအင်းအင်းညည်းတယ်။
ငါးမိနစ်လောက် ဖွားဖွားရဲ့စောက်ဖုတ်ကို ပါးစပ်နဲ့ရှယ်ဆွဲစုပ်လျက်အပြီးမှာတော့ ကျုပ်ခေါင်းကို သူ့စောက်ဖုတ်နဲ့ ဇွတ်ဖိကပ်ထားပြီး ဖွားဖွားဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ ကော့ပြီး တချီပြီးသွားတယ်။ ကျုပ်မျက်နှာမှာလည်း ဖွားဖွားရဲ့စောက်ရည်တွေကို ပေပွလို့။ စိတ်ကတအားပါနေတာနဲ့ ဖွားဖွားရဲ့စောက်ဖုတ်ပေါ်ပေပွနေတဲ့ စောက်ရည်တွေကို တစက်မကျန် လျှာနဲ့လိုက်လျက်ပြီး မျိုချလိုက်တယ်။ ဖွားဖွားက အိပ်ယာပေါ်ကနေ အားရကျေနပ်ပြီး အချစ်ရည်လဲ့နေတဲ့မျက်လုံးနဲ့ လှမ်းကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ထထိုင်ပြီး ကျုပ်ကိုဆွဲထူပြီး နှုတ်ခမ်းချင်း ကစ်ဆင် ဆွဲပြန်တော့ ကျုပ်လီးကြီးက အသားကုန်တောင်လာပြန်ရော။
ဖွားဖွားက လက်တဖက်နဲ့ ကျုပ်လီးကြီးကို လှမ်းဆုပ်ပြီး “လာခဲ့ ငဆိုးလေး ဒီတခါ ဖွားဖွားအလှည့်” ဆိုပြီး ကုတင်ခြေရင်းမှာ ပဆစ်တုပ်လေးထိုင်ပြီး ကျုပ်လီးကို သူ့ပါးစပ်ထဲထည့်ပြီး ရှယ်မှုတ်ပါလေရော။ ကျုပ်လီးက ရှည်ပြီးတုတ်တော့ ဖွားဖွားပါးစပ်နဲ့ လီးကို အကုန်မစုပ်နိုင်။ ကျုပ်အားမရတော့ဘူး ကျုပ်လီးကို ဘွားတော်ပါးစပ်ထဲ အကုန်ထည့်ချင်တာ။ ပြောရရင် စော်တွေကိုကျုပ်လိုးချင်တဲ့အခါ မကောင်းတဲ့ဉာဉ်က ရက်ရက်စက်စက်လိုးချင်တာပဲ။ သွားပြီ ဖွားဖွားတော့ ကျုပ်ရဲ့ရမ္မက်ဇောမှာ ကူကယ်သူမဲ့ ရက်ရက်စက်စက် အလိုးခံရတော့မယ်ဆိုတာ သိလိုက်ပြီ။ ကျုပ်စိတ်ထိန်းမရတော့ဘူး။
ဖွားဖွားခေါင်းကို ကုတင်စောင်းနဲ့ကပ်ပြီး “ဖွားဖွား သားလီးကို ဖွားဖွားရဲ့ပါးစပ်ထဲ အဆုံးထိသွင်းပြီး လိုးချင်လို့ ဖွားဖွား ခဏတောင့်ခံပေးနော်”ဆိုတော့ “အင်း သားစိတ်တိုင်းကျ ဖွားဖွားဖြည်းဆည်းပါ့မယ် ဖြည်းဖြည်းတော့လုပ်နော်သားလေး” “ဟုတ် ဟုတ် ဖွားဖွား”ဆိုပြီး လီးကို ဖွားဖွားရဲ့ ပါးစပ်ထဲ တရစ်ချင်း ဖိသွင်းတယ်။ လီးရဲ့ ၃ပုံ၂ပုံလောက်ဝင်တော့ ဘွားတော်ကြီး မခံနိုင်တော့ဘူး ပျို့တက်လာတယ်။ “အု ဂလု အု အု” ကျုပ်ပေါင်ကို ဇွတ်တွန်းတယ် သနားတာနဲ့ လီးကို ဖွားဖွားပါးစပ်ထဲကနေ ခဏပြန်ထုတ်ပြီး “အဆုံးထိဝင်တော့မှာ ဖွားဖွားရဲ့ ခဏလေးပါနော် ခဏလေးပဲ သည်းခံလိုက်”ဆိုပြီး ဖွားဖွားရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကို ကုတင်ပေါ်နောက်ပြန်လှန်တင်ပြီး ကျုပ်လက်တဖက်နဲ့ဖိချုပ်ထားလိုက်တယ်။
လက်တဖက်နဲ့လီးကို အစွမ်းကုန်တောင်အောင် ရှေ့ထိုးနောက်ငင် လေးငါးချက်လောက် ဂွေဆွဲလိုက်တယ်။ လီးအသားကုန်တောင်လာတော့ “ဖွားဖွား ပါးစပ်လေးဟ”ဆိုပြီး ကျုပ်လီးကြီးကို ဘွားတော်ကြီးပါးစပ်ထဲ တထစ်ချင်းဖိသွင်းလိုက်တာ ၃ပုံ၂ပုံဝင်တော့ ဘွားတော်ကြီး ဇွတ်ရုန်းတယ်။ သူရုန်းလေ ကျုပ်က ပိုလိုးချင်လေဆိုတော့ ကျန်တဲ့၃ပုံ၁ပုံကို ဖွားဖွားကြီးပါးစပ်ထဲ သူ့ခေါင်းကို ကုတင်စောင်းနဲ့ညှပ်ပြီး အသားကုန်ဆောင့်ချပစ်လိုက်တယ်။ သနားတော့ သနားပါရဲ့ အောက်မှာ မျက်ရည်အရွှဲသားနဲ့ မရုန်းနိုင်။
ကျုပ် အန်တီဖွားဖွားကြီးပါးစပ်ကို အချက်နှစ်ဆယ်လောက် ဆက်တိုက် ဆောင့်ဖိပြီးလိုးချလိုက်တယ်။ ကျုပ်လဥနဲ့ သူ့မေးစေ့လေးရိုက်သံကို တဖက်ဖက်နဲ့။ ၃ရက်လောက် ဂွင်းမထုထားရသေးတော့ သုတ်ရည်တွေများ အပြစ်လိုက် အပြစ်လိုက်နဲ့ ဖွားဖွားရဲ့အာခေါင်ထဲထိ တဆတ်ဆတ်နဲ့ ပန်းထွက်ကုန်တာ။ ကျုပ်လည်း တချီပြီးရော အန်တီဖွားဖွားကြီးရဲ့ပါးစပ်ထဲကနေ လီးကိုသာသာလေးထုတ်ပြီး သူ့မျက်နှာပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်။ ဘွားတော်ကြီးက ကျုပ်ဒီလောက် အကြမ်းပတမ်းဆောင့်လိုးတာကို ဘယ်လိုမှမနေ ကျုပ်လီးကြီးကနေ တစက်စက်ကျနေတဲ့ သုတ်ရည်ပြစ်ပြစ်တွေကို လျှာနဲ့လိုက်သိမ်းပြီး မြိန်ရည်ရှက်ရည် မျိုချနေလေရဲ့။
တချီသာပြီးသွားတယ် ကျုပ်လီးကြီးက ပျော့မသွား။ အဲဒါနဲ့ ” ဖွားဖွား သားတို့လိုးကြရအောင်နော်” ဆိုတော့ ခေါင်းလေးအသာညိတ်ပြတယ်။ အန်တီဘွားတော်ကြီးကို ကုတင်အောက်ကနေ ကုတင်စောင်းပေါ်မတင်ပြီး ပက်လက်လှန် ပေါင်ကားပစ်လိုက်တယ်။ ကျုပ်က ကုတင်အောက်က မတ်တပ်ရပ်လျက်ကနေ ကျုပ်လီးကို အန်တီဖွားဖွားကြီးရဲ့ စောက်ဖုတ်ဝနားတေ့ထားလိုက်တယ်။ မထည့်သေးဘဲ ကျုပ်လီးဒစ်ကြီးနဲ့ ဖွားဖွားရဲ့စောက်စိလေးကို ပွတ်ဆွဲပြီး အထက်အောက်ကြောင်းပေးလိုက်တော့ ဖွားဖွားရဲ့စောက်ဖုတ်လေး အရည်ရွှဲလာတယ်။ ဖွားဖွားတွန့်တွန့်လူးနေပြီ။
“အင်း…. အား…. ရှီး….” နောက်ထပ်လေးငါးချက်လောက်ဖိဆွဲတော့ အန်တီဖွားဖွားကြီး မခံနိုင်တော့။ “သားရယ် ဘာလို့ဒီလောက်တောင် တော်နေတာလဲ ဖွားဖွားကို လိုးပေးပါတော့ ဖွားဖွားဘယ်လိုမှ မနေနိုင်အောင် ကောင်းနေလို့ပါ သားလေးရယ် နော် နော်” ကျုပ်အန်တီဖွားဖွားကို သနားသွားတယ်။ “ဟုတ် ဟုတ် ဖွားဖွား သား အသားကုန်ဆောင့်လိုးမယ်ဆိုရင် ဖွားဖွားခံနိုင်လောက်လားဟင်” “သားသားရဲ့ အပြုအစုကောင်းလွန်းလို့ကို ဖွားဖွားက သားဘယ်လိုလိုးလိုး အလိုးခံမှာပါသားရယ် ဖွားဖွားကို သားစိတ်ကြိုက် လိုးလိုက်တော့နော် သား ဖွားဖွား အလိုးခံနိုင်အောင် ခံပါ့မယ်”
ဖွားဖွားစောက်ဖုတ်ဝကို လီးတေ့လိုက်ပြီး မထည့်သေးဘဲ သူမပေါင်နှစ်လုံးကို ပိုကားလာအောင် လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ထောက်ကာ ဖွားဖွားစောက်ပတ်လေးထဲသို့ ကျုပ်လီးလေး တဖြည်းဖြည်းချင်း သွင်းလိုက်တယ် “အာ့ သား ဖြည်းဖြည်း သားလီးကြီးကကြီးလွန်းတော့ ဖွားဖွားစောက်ဖုတ်လေး အရမ်းကြပ်နေတယ် ဖြည်းဖြည်းချင်းစလိုးနော်သားလေး” ၁၀ချက်လောက် အထုတ်အသွင်းလုပ်လိုက်တော့ အရည်တွေရွှဲပြီး ဖွားဖွားကောင်းလာသည်။ “ဖလွတ် ဖလွတ် ဖလွတ် ဖလပ် ဖလပ် ဘွတ်” “အား ရှီး သားရေ ဖွားဖွားအရမ်းကောင်းနေပြီ အသားကုန်ဆောင့်လိုးတော့ သား” ပက်လက်လှန်ပြီး လှေကြီးထိုးရိုးရိုးအလိုးခံနေတဲ့ ဖွားဖွားကို ကျုပ်ပွေ့ယူလိုက်သည်။
ဖွားဖွား အလိုက်သင့်လေးပါလာသည်။ မတ်တပ်ရပ်ရင်း ဖွားဖွားကို ပွေ့ပြီးလိုးရတာ တော်တော်အရသာရှိသည်။ ဖွားဖွားကလည်း သူ့လက်လေးနှစ်ဖက်နဲ့ ကျုပ်လည်ပင်းကို တင်းတင်းလေးဖက်ပြီး အလိုးခံရတာ ဇိမ်တွေ့နေသည်။ ဆံထုံးထုံးထားသော အန်တီဖွားဖွားရဲ့ ဆံပင်တွေပြေကျပြီး ဆံရှည်တွေက လိုးချက်နဲ့အညီ ဝှေ့ယမ်းနေသည်။ ကျုပ်လီးကို ဖွားဖွားရဲ့စောက်ဖုတ်လေးထဲ အဆုံးထိဝင်အောင် ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ဆောင့်လိုးပေးလိုက်တယ်။
“ဖတ် ဖတ် ဖလပ် ဖလပ် ဖလပ်” “အား… ကောင်းလိုက်တာ အမလေး…. အမေ့ ဖတ် ဖတ် အားး အားး” “အား အား… သား ဖွားဖွားပြီးတော့မှာ ဆောင့် ဆောင့် အား အား ရှီး အား အမေ့” တချက်ကော့တက်ပြီး ဖွားဖွားပြီးသွားသည်။ ကျုပ်က ဖွားဖွားကိုပွေ့လိုးရင်းပြီးသွားတာဆိုတော့ ဖွားဖွားရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲက စောက်ရေတွေက ကျနော်လီးတန်ကြီးနဲ့ဖွားဖွားရဲ့ စောက်ဖုတ်နံရံကြားလေးထဲကနေ အပြင်ကိုစီးကျပြီး ကျုပ်လဥတွေကတဆင့် အောက်ကို တစက်စက်ကျနေသည်။
ကျုပ်လီးကို ဖွားဖွားစောက်ဖုတ်ထဲက မထုတ်သေး။ ဖွားဖွားကို ပွေ့ထားရင်း ကုတင်ပေါ်ထိုင်ချလိုက်သည်။ “ဖွားဖွား သားကို အပေါ်က ထိုင်ဆောင့်ပေးဦး” “အင်း အင်း သား ဖွားဖွား ဆောင့်ပေးမယ်” ကျုပ်က အောက်က ပက်လက်လှန်ပေးထားတယ်။ အန်တီဖွားဖွားက အသက် ၆၀နီးပေမယ့် အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် ကျွမ်းကျင်လွန်းတယ်။
အပေါ်ကနေ ကျုပ်လီးကို သူ့စောက်ဖုတ်လေးနဲ့ ညှစ်ပြီး ဆောင့်ချတယ်။ ကျုပ်လီးကို အဆုံးထိဝင်အောင်ဖိချပြီး ရှေ့ထိုးနောက်ငင်လုပ်တယ် စကောဝိုင်းတယ် အောက်ကကျုပ်မှာတော့ ရူးခါလို့ ကျုပ်ရဲ့လက်ကို လှမ်းဆွဲပြီး သူ့နို့တွေပေါ်တင်ပေးတယ် ကျုပ်လည်း ဖွားဖွားနို့ကြီးတွေကို ညှစ်ချေတယ်။
အောက်ကနေလိုးရတာအားရတော့ “ဖွားဖွား လေးဖက်ထောက်ပြီး ဖင်ကုန်းပေးဦး သား ဖွားဖွားကို ခွေးလိုးလိုးမလို့ ” “အင်းအင်း သား ဖွားဖွားလည်း အဲလိုအလိုးခံရတာကြိုက်တယ်” အန်တီဖွားဖွားကြီးက လေးဖက်ထောက်ပြီး ဖင်ကုန်းပေးသည်။ နဂိုကတည်းကမှ တင်က အလုံးလိုက် အယ်ထွက်နေသူဆိုတော့ ဖင်ကုန်းလိုက်တော့ လှလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဗျာ စောက်ဖုတ်လေးက နောက်ကိုပြူထွက်လို့။
ကျုပ်လည်း နောက်ကနေ အသာလေးဒူးထောက်ပြီး အန်တီဖွားဖွားကြီးရဲ့ စောက်ဖုတ်ဝမှာ ကျုပ်လီးကြီးတေ့ပြီး တဖွတ်ဖွတ်နဲ့ ဆောင့်လိုးလိုက်တာ အန်တီဖွားဖွားကြီးရဲ့ နို့အုံလေးတွေက ကျုပ်ရဲ့လိုးဆောင့်ချက်နဲ့အညီ ခါယမ်းနေတာ ဒီအတိုင်း အန်တီဖွားဖွားကြီးရဲ့ ဖင်တုံကြီးကိုင်ပြီး ဆောင့်လိုးရတာ အားမရတော့ ဆံပင်မွှေးကို နောက်လှန်ဆွဲပြီး လိုးပေးလိုက်တယ် ” အား… အမေ့ အား အား သားရေ ကောင်းလိုက်တာ ဘာလို့ အဲလိုတွေ လိုးတတ်နေရတာလဲကွာ အား ရှီး…” “ဖွားဖွား သား ပြီးချင်နေပြီ ဖွားဖွားပက်လက်လှန်ပေးတော့” “အင်း သား ဖွားဖွားလည်း နောက်တချီပြီးတော့မယ် သားသားနဲ့ဖွားဖွားပြိုင်တူပြီးကြရအောင်လေသားနော် နော်” “ဟုတ် ဟုတ် ဖွားဖွား သား ဖွားဖွားကိုအသားကုန်ဆောင့်လိုးလိုက်တော့မယ်နော်” အန်တီဖွားဖွားကြီးရဲ့ နို့နှစ်လုံးကို ဆွဲပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်လိုးလိုက်သည်။
“ဖွတ် ဖလွတ် ဖလွတ် ဖလပ်ဖလပ် “လိုး လိုး သား အား အမေ့ အား အား အမလေး အား ရှီး….. အမေ့ အား…..” “အာ့ အား… ဖွားဖွားရေ အားအား ရှီး…” ကျုပ် ဖွားဖွားရဲ့ ကိုယ်ပေါ်ကို မှောက်လျက်ကျသွားပြီး ကျုပ်လရေတွေကို အန်တီဖွားဖွားရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးထဲ တဗြစ်ဗြစ်နဲ့ ပန်းထည့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ် အန်တီဖွားဖွားကတော့ ကျုပ်ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖက်ထားရင်း သူကျုပ်ကို ဘယ်လောက်ချစ်သွားကြောင်း သူ့ဘဝမှာ ကာမစည်းစိမ်ကို ဒီလောက်ကောင်းကောင်းခံစားရလိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ခဲ့ဖူးကြောင်းတွေ တဖွဖွပြောပြီး ကျုပ်ကိုအနမ်းမိုးတွေ ချွေနေပါတော့တယ်။
အဲဒါကတော့ ကျနော်အသက် ၁၉နှစ်သားနဲ့ ကျနော့်အဖွားအရွယ် အသက်၆၀နီးပါး အဆောင်ပိုင်ရှင်အန်တီဖွားဖွားကြီးတို့ရဲ့ ရမ္မက်နယ်ကျွန်ခဲ့ပုံ ဖြစ်ရပ်မှန်အစပါ။ ကျနော်ကျောင်းပြီးသွားတာတောင် အိမ်မပြန်ချင်တော့။ ဖွားဖွားကလည်း ပြန်ခွင့်မပေး။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်အကြောင်းကိုလည်း တော်တော်များများက သိနေကြပါပြီ။ အခုထိလည်း လင်မယားလို လိုးနေကြဆဲပါပဲ။
အရင်ကထက်စာရင် ပိုတော့လွတ်လပ်သွားတာပေါ့။ အခု ကျနော်က အသက် ၂၅ ကျနော့်ရဲ့မယား ကျနော့်ဖွားဖွားကြီးက အသက်၆၄ အခုထိလည်း လိုးလို့ကောင်းနေဆဲပါပဲ။ ဒါလောက်လိုးနေတာတောင် အန်တီဖွားဖွားကြီးရဲ့ တင်တွေ ပြုတ်မသွား။ ကျုပ်ကံကောင်းတယ်လို့ပဲ မှတ်ပါတယ်။ နာမည်တွေတော့ လွှဲထားပါတယ်။ ဒီစာရေးတာလည်း အန်တီဖွားဖွားကြီးသိပါတယ်။ပြီးး